जान्नुहोस् ! यसरी भएको थियो भगवान रामको मृत्यु – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ०२, २०७५१२:२३
काठमाडौँ । भगवानको रामको जन्म आधुनिक भारतमा पर्ने अयोध्या शहरमा भएको हो । उनी राजा दशरथका जेठा पुत्र हुन् । रामायणमा उल्लेख भएअनुसार भगवान विष्णुको सोह्रै कलाहरु राजा दशरथले अलग अलग गरेर श्रीराम कला, लक्ष्मण कला, भरत कला र शत्रुधन कला गरेर क्रमश चार पुत्रको रुपमा जन्म दिएका थिए ।
सबैभन्दा जेठा पुत्र श्रीराम जसलाई रघुनाथ राघव, रघुपति, रामचन्द्र आदि नामले चिनिन्छ । मर्यादा पुरुष श्रीराम पितृ बचन मान्ने एक हुन् । उनको माताको नाम कौशल्या थियो । राजा दशरथलाई लामो समय सन्तन प्राप्ती नभएपछि गुरु बशिष्ठको आज्ञानुसार पेत्रेष्ठी यज्ञ गराएका थिए । त्यसपछि राजा दशरथको तीनवट रानीशहरुबाट ४ छोराको जन्म भयो । रामायणको बारेमा सामान्य जानकारी भएको व्यक्तिलाई यो कुरा पक्कै जानकारी होला ।
१४ वर्ष वनबास बसेका राम अरोध्या फर्केपछि उनको मृत्यु भएको थियो । पद्य्म पुराणमा उल्लेख भएअनुसार एक वृद्ध सन्त भगवान रामको दरबारमा पुगेका थिए । दरबारमा एक्लै पुगेका रामसँग सन्तले एक्लै कुरा गर्ने इच्छा जाहेर गरेर गोप्य कोठामा लगे र ढोकामा आफ्ना भाइ लक्ष्मणलाई राखे । यसरी एक्लै कोठामा बसेर कुरा गर्दै गर्दा सन्तसँगको कुराकानी भंग गरेर रामले सन्तलाई मार्ने चेतावनी दिए । तर लक्ष्मण्ले आफ्नो जेठो भाइको आज्ञालाई स्वीकार गर्दै उनीहरुलाई कोठामा छोडेर आफु बाहिर पहरा दिन बसे ।
ती वृद्ध सन्त अरु कोही नभएर विष्णुलोकबाट पठाइएको काल थिए । जसलाई यो कुरा बताउन पठाइएको थियो की भगवान रामको आयु पृथ्वीमा पूरा भएकाले अब उनी आफ्नो लोकमा फर्कनुपर्ने थियो । दुइजना बीच कुराकानी चलिरहेको बेला ऋषि दुर्वास पनि आएका थिए । उनले पनि रामसँग कुरा गर्न चाहेको भन्दै भित्र जान अनुमती लिए । तर लक्ष्मणले भाइको आज्ञा विपरित त्यस्तो नगर्ने बताए । ऋषि दुर्वास सधै आफ्नो अन्त्यको दुर्वास थिए । उनको क्रोध सिकारमा जोकोही परिरहेको हुन्थे । लक्ष्मणले रामलाई भेट्न आज्ञा नदिएपछि ऋषि दुर्वासले लक्ष्मण र राम दुवैलाई श्राप दिने चेतावनी दिए ।
ऋषि दुर्वासको श्राप सुनेपछि लक्ष्मण द्धीविधामा परे जबकी उनलाई आफ्नो भाइको आज्ञा तोडु या ऋषि दुर्वासको श्रापबाट बचाउ । यद्यपी लक्ष्मण चाहन्थे की उनको कारण दुवैलाई हानी होस् । त्यसपछि उनले कठोर निर्णय गरेर आफ्नै बलि दिने फैसला गरे । लक्ष्मणको सोच के थियो भने ऋषि दुर्वासलाई भित्र जान नदिए ऋषिको श्राप रामले लिनुपथ्र्यो । यदि लक्ष्मण भाइको विरुद्धमा गए भने भाइको विरुद्ध मृत्युदण्ड लिन पथ्र्यो । त्यसकारण कठोर निर्णय गरेका लक्ष्मणले मृत्युदण्डलाई स्वीकार गरेर आफै कोठा भित्र छिरे ।
त्यसपछि लक्ष्मणलाई मृत्युदण्डको चर्खामा परे । यसो हुँदा रामपनि धर्मसंकटमा परे । आफ्नो फैसलाबाट मजबुर रहेका रामलाई भाइको प्रेमले पोलिरहेको थियो । त्यतिबेला नै रामले भाइ लक्ष्मणलाई मृत्युदण्ड लिनु भन्दा देश बाहिर जान भने । त्यतिबेला देश निकालाको सजाय पनि मृत्युदण्ड बराबरको थियो ।
यद्यपी आफ्नो जोठा भाई रामबिना एक पल पनि बाच्न नसक्ने लक्ष्मणले मृत्युदण्ड नै स्वीकार गरे । त्यसपछि संसारबाट मुक्ति पाउने इच्छा जाहेर गर्दै सरयू नदीको किनारमा गएर हाम फाले र लक्ष्मणले जीवनको अन्य गरे । पृथ्वी लोकबाट उनी दोस्रो लोकमा गए । अन्तत शेषका अवतारमा लक्ष्मण विष्णु लोकमा पुगे ।
राष्ट्रपति भण्डारीको लागि ओछ्याएको ‘रेड कार्पेट’मा सर्प देखिएपछि
यी युवतीले राखिन् शरिर भरि ट्याटु खोपेर कीर्तिमानी , कति खोपाइन् ट्याटु ?
फ्लर्ट गर्नमा युवा भन्दा युवतीहरु खप्पिस ! यसरि गर्छन फ्लर्ट